Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 Martsa 2019	• 11 Comments
'Ordo ab Chao' dia latinina ho 'mandidy ny fandriam-pahalemana', farafaharatsiny izay efa nampiharina hatramin'izao fotoana izao mba hahafahana mamantatra indray ny fahefana. Elo avy amin'ny mason'ny Freemasonry, izay mizarazara ho dabilio. Ny laharana ambony ao anatin'io fiarahamonina miafina io dia 33. Hitantsika izany isa betsaka amin'ny hetsika manan-danja na fisehoan-javatra izay ananan'izy ireo rantsan-tànana amin'ny tavy. Ny andraikitry ny fiarahamonina miafina dia matetika tsy voavaly na nesorina ho toy ny teorian'ny fikomiana, fa raha jerentsika fotsiny ireo trano mpanjaka, dia hitantsika fa ny lanjany dia mifandray amin'ireo 'baiko'. Ny Orange, ohatra, dia manan-daza ao amin'ny Malagasy knightthood (fiarahamonina, ampahany amin'ny hazon'ny fianakavian'ny fikambanana miafina).
Ny fiaraha-miafina miafina dia avy amin'ny biby fara-tampony na babylonianina. Izany dia miverimberina any amin'ireo governemanta fototra piramidana voalohany avy amin'ireo "civilisations" fantatra voalohany. Toa mahagaga fa ao anatin'ireny fikambanana miafina ireny dia misy sampana fitambaran'ireo pharaonic bloodlines izay mitazona ny tsipika misy azy amin'ny alàlan'ny fanambadian'ny planina.
"Ordo ab Chao" no teny filamatry ny freemasonry Scottish Scottish. Ny teny anglisy hoe 'Scottish' dia avy amin'ny teny grika 'skotià' (ny fivoahan'ny vehivavy avy amin'ny skotios, maizina, aloka, avy any am-parany, avy amin'ny skotos, haizina). Azonao atao ny milaza fa raha ny 'skotos' dia mijoro ho haizina sy aloka, io 'skotià' maneho ny hazavana. Raha hitantsika aoriana fa i Luciferianina ny mason-tsivana, dia angamba ny hazavana Losifera. Raha ny marina, Andriamanitra dia niteny hoe 'misy hazavana' ka dia navadika ny efijery ary niseho ilay sary. Mampahatsiahy ny lalao Playstation izay midika izany, ka ny sary dia miseho eo amin'ny efijery amin'ny endriky ny hazavana pixel (jereo ny teoria simulation).
Ny tempolin'i Venus Scotia dia tany Ejipta fahiny. Voalaza fa ny firenena any Ekoatera dia naka ny anarany avy amin'ny mpanjakavavy Ejiptiana antsoina hoe Scota. Eto isika dia mahita rohy hafa miaraka amin'ny iray amin'ireo sivilizasiôna tranainy indrindra, dia an'i Ejipta. Ny adihevitra momba an'io fanjakana io taloha, Babylona na Egipta, dia toa tsy tanteraka tanteraka raha mihady lalina ianao, saingy ny tanjona dia ny hoe ny fiarahamonina miafina dia toa mifandray amin'ny fara-tampony amin'ny fotoana. Na ahoana na ahoana, mazava ho azy fa toa misy fanambadiana nomanina ao anatin'ity vondrona ity. Ny zava-manahirana anefa dia izao fa amin'izao fotoana izao dia nesorina avokoa ny zava-drehetra ho toy ny vaovao sandoka na ny teorian'ny fikomiana, hany ka vitsy no mbola mijery azy io. Tsy hanelingelina eto koa aho. Googlet ny tenanao mba hahalalanao ny fomba nanambadian'ny elitika nandritra ny taonjato maro tsy noho ny fihetseham-pon'ny mpifankatia, fa noho ny fanatanterahana azy.
Albert Pike dia endrika manan-danja avy ao amin'ny Freemasonry Scottish Scottish. Izy no ambony indrindra ary nanana ny mari-pahaizana 33e. Araka ny tantara ofisialy, Pike dia kapiteny tao amin'ny ady Meksikana-Amerikana, mpisolovava, poeta ary mpikambana ao amin'ny KuKluxKlan. Niroborobo haingana tao amin'ny Tafita Lehibe Fandrosoana ny pike tao anatin'ity hetsika ity. Nanoratra sy nandika ny fomban-drazan'i Masonic izy ary namoaka ny antontan-taratasy filôzôma voalohany Morals sy Dogma ao amin'ny rindrin'ny Scottish mafana efa ela sy nekena, izay boky manan-danja ao amin'ny fikambanana. Ny tsangambatom-pahatsiarovana ny Pike dia sary sokitra tokana ao Washington DC ho fanomezam-boninahitra ny Jeneraly Confederate. Ny tsangambato dia iray amin'ireo tsangambato 18 an'ny Ady amin'ny ady an-trano any Washington, DC, izay voarakitra miaraka amin'ny 1978 ao amin'ny National Register of Historic Places. Izany no mahatonga an'i Pike ho toy ny olona manan-danja izay efa teo am-pelatanan'ny fanjakana amerikana lehibe (ankehitriny ny fihenan-dàlana) izay fantatsika ankehitriny.
Tsy hisy anjara biriky lehibe amin'ny tantara ofisialy intsony ny fahafaham-baraka. Miasa toy ny teo aloha izy ireo ary hilalao foana ny maha-zava-dehibe azy ireo (eo amin'ny sehatra hita maso). Azonao atao ny mampitaha izany amin'izao fotoana izao, izay ahitana ny tranon'ny mpanjaka, asehon'ireo haino aman-jery, ho toy ny fikambanam-piraisan-kina izay ny fitondrana demokratika dia efa voafehin'ny fitondrana demokratika (mazava ho azy fa sarotra). Koa raha mikaroka Wikipedia amin'ny famakiana ofisialy an'ireo tompon'andraikitra voalaza etsy ambony ianao dia tsy manana andraikitra manan-danja toy izany izy ireo. Amin'ny marika rehetra izay hitantsika manodidina antsika, na izany aza, dia tafalentika miaraka amin'ny marika famantarana ny freemasonry isika (Max Verstappen, tsia 33, ohatra, ary ny sambo kely eo amin'ny sainan'ny Formula 1). Ny mason'ny olona dia maneho fa izy ireo no mitondra, saingy ny jamba dia hita miharihary.
Ao amin'ny 1871, Albert Pike dia nanoratra taratasy ho an'i Giuseppe Mazzini, mpiompy Italianina vahiny. Amin'ity taratasy ity no naminaniany ady lehibe telo. Amin'ireny ny roa voalohany dia feno soratra. Vakio ny dikan'ity taratasy manaraka ity:
Ny Ady Lehibe Voalohany dia tsy maintsy noforonina mba hahafahan'ny Illuminati mamarana ny herin'ny Czars ao Rosia ary mahatonga ny firenena tsy mpino communist. Ny fahasamihafana eo amin'ny fanjakana britanika sy alemana dia hoentin'ny mpiasan'ny Illuminati ary ampiasaina hananganana ity ady ity. Amin'ny fiafaran'ny ady, ny kolontsaina dia naorina ary nampiasaina handrava ny governemanta sy ny fivavahana
Ny Ady Lehibe Faharoa dia tsy maintsy atambatra amin'ny fampiasana ny fahasamihafana eo amin'ireo fasista sy ireo mpomba ny ziona. Ity ady ity dia tsy maintsy ampiharina hamongorana ny Nazisaly ary mba hahazoana antoka fa matanjaka ny Zionis ara-politika mba hananganana fanjakana any Israely any Palestina. Amin'ny Ady Lehibe Faharoa, ny communisme iraisampirenena dia tsy maintsy mivoatra tanteraka ho toy ny tsy fitoviana amin'ny Kristianisma, mandra-pahatongan'ny fotoana ahafahantsika mampiasa ireo fahasamihafana ireo amin'ny loza voajanahary farany.
Ny Ady Lehibe Faharoa dia tsy maintsy arovana (avy amin'ny solontenan'ny "Illuminati") amin'ny alalan'ny fifandonana eo amin'ny ziona politika sy ireo mpitarika ao amin'ny tontolo Islamika. Ny ady dia tsy maintsy entina amin'ny fomba izay hifamely ny finoana silamo (ny tontolo Arabo Miozolomana) sy ny Zionis politika (ny fanjakan'i Isiraely). Ireo firenena izay tafiditra amin'ity fifandonana ity dia hositranina tanteraka amin'ny harerahana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy ary ara-toekarena. Izahay dia mamoaka ny nihilists sy ny tsy mino an'Andriamanitra ary hiteraka loza goavana ara-tsosialy. Hanafoana ny tsy finoana tsy misy fihatsarambelatsihy eto an-tany isika. Haneho ny alahelony isika. Izy ireo no fototry ny tebiteby amin'ny olona. Amin'izao fotoana izao dia mila miady amin'ny vitsy an'isa ny vahoaka, tsy hisy intsony ny revolisiona tsy mpino ary ho ringana ireo mpandroba ny sivilizasiona. Ho diso fanantenana amin'ny ankamaroan'ny olona ny Kristianisma. Ny sainy dia tsy hahalala lalana na kômpà. Haniry hahaleo tena izy ireo. Te-hampifantoka ny fiderany amin'ny zavatra iray izy ireo. Amin'ny farany ny hazavan'i Losifera marina dia haseho amin'ny mpanatrika. Ny fanehoana an'i Losifera dia hanaraka ny faharavan'ny kristianisma sy ny tsy finoana an'Andriamanitra, izay samy hofoanana amin'ny tsofa iray.
Matetika dia matetika no milaza fa ity taratasy ity dia fitaka, satria ny teny hoe "Nazism" dia tsy ho fantatra velively ao amin'ny 1871. Ny tsy firaharahiana an'io hevitra io dia ny mpamorona ny script dia afaka mamoaka teny mialoha ny hahafantaran'ny olon-tsotra azy ireo teny ireo. Noho izany raha mametraka anarana marika eo amin'ny tsena ho toy ny orinasa ianao, ny sampan-draharaham-barotra dia hahita fa haingana lavitra noho ny vahoaka be no hahita izany. Eny, raha nanoritsoritra ny soratra (faminaniana) momba ny namany Mazzini i Pike, dia mety hisy fe-potoana izay tsy fantatra tamin'ny olon-drehetra hatramin'ny taona maro taty aoriana.
Toa efa misy ny ady lehibe eran-tany. Ity, raha ny marina, dia mifanaraka amin'ny sarin'ireo faminaniana ao amin'ireo fivavahana lehibe eran-tany, izay toa mifanohitra amin'ny toetr'andro (dualism), saingy mitovy amin'ny endriky ny fotoana farany (jereo eto). Ohatra, samy Silamo sy Kristiana miandrandra an'i Anti-Christ (Dajjal amin'ny finoana silamo) izay hanolotra ny tenany ho Mesia. Miandry koa ny fiverenan'i Jesosy (jereo ohatra ity fanazavana ity avy amin'ny Sheikh Imran Hosein). Ny Jiosy dia manantena koa fa ny Mesia sy i Jerosalema dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fivavahana rehetra. Ny fananganana ny fanjakan'i Isiraely koa dia nandray anjara lehibe tamin'ny ady lehibe roa voalohany, na dia efa voasariky ny tantara an-tsoratra ofisialy aza izy io. Tamin'ny Ady Lehibe Voalohany, ny tany dia natokana ho an'ny fanjakan'i Isiraely ao amin'ny Balfour fanambarana. Ao amin'ny Fifanarahana Haavara avy amin'ny 1933 dia efa voarakitra tamin'i Alemaina ny fifindra-monina Jiosy tany Palestina. Ny fanjakan'i Isiraely dia naorina taoriana kelin'ny Ady Lehibe Faharoa. Ny Ady Lehibe Faharoa dia nandray anjara lehibe teo amin'izany.
Ny Ady Lehibe Faharoa, araka ny taratasin'i Pike, dia hitsangana avy amin'ny fifandonana eo amin'ny ziona politika sy ireo mpitarika ao amin'ny tontolo Islamika. Raha mijery ireo faminaniana ara-pivavahana isika, dia mahita an'i Jerosalema amin'ny andraikitra lehibe. Ny fanorenana indray ny tempoly an'i Solomona dia hanana andraikitra lehibe amin'izany, araka ny faminaniana farany avy amin'ireo fivavahana voalaza etsy ambony. Ny fanorenana an'io tempoly io dia voalaza ao amin'ireo faminaniana ireo ho mariky ny fahatongavan'ny antikristy, izay ho famantarana fa hisy ady lehibe eran-tany rehetra manerana izao tontolo izao. Manan-danja ny fitsidihan'ny Sekreteram-panjakana amerikana Mike Pompeo vao tsy ela izay nitsidika ny catacombs teo ambanin'ny mosquée izay amboamboarina ao amin'ny ravan'ity tempoly ity (ziona politika?). Heveriny fa modely tamin'ity tempoly ity (jereo eto). Na ny taratasy avy amin'i Albert Pike, sy ny faminaniana farany amin'ny endriny, ary koa ireo famantarana izay manambara fa ny zavatra hitranga ao amin'ireo soratra masina ireo, dia manondro fa manatri-maso ny soratra masina lehibe isika. Soratra iray izay fantatry ny mpitarika ny fikambanana miafina toy ny grady 33e mason.
Noho izany dia azontsika atao ny milaza fa ny blaogy pharaoh dia mahatsapa ny sora-baventy ary manery ny fandrosoana ara-tsosialy mifanaraka amin'io soratra io. Ny lanjany lehibe iray izay mitazona azy ireo dia ny 'Ordo ab Chao'. Izany no mahatonga antsika hiteny amim-pahatokisana tanteraka fa izy ireo dia manangana hatrany ny korontana mba hahazoany fahefana bebe kokoa. Izany no mahatonga ahy milaza mialoha fa ny Brexit dia mankasitraka ity script ity ary ity no tompon'antoka hery bebe kokoa amin'ny tontolon'ny hery Islamika avy amin'ny taratasy etsy ambony avy amin'ny Pike. in ity lahatsoratra ity Nohazavaiko ny fomba nomaniko nandritra ny taona maro fa hiverina ny Fanjakana Ottoman ary ahoana no hampiasana ny Brexit hampiato ny korontana any Eorôpa.
Afaka manoratra boky manontolo momba ity lohahevitra ity aho ary mbola afaka mamelabelatra ny script. Na izany aza, efa nataoko tamin'ny antsipiriany izany ity lahatsoratra ity. Noho izany dia tokony haverina tsara ny famakiana io lahatsoratra io indray. Farany, tiako ny hanondro ny lohan'ny sphinx (antsoina hoe phoenix). Mazava avy ao amin'ny lisitra fa ny satroboninahitra (ny bloodhines pharaoh) dia mampiasa ny foto-kevitry ny phoenix roa: ny dualisma notarihan'ny sabatra. Ny vato avo amin'ny piramida dia ahitana ny isa 33. Ny tampon'ny piramidan'ny piramida sy pharaoh dia mifehy an'ity tontolo ity miorina amin'ny fitsipi-pitenenana Luciferian (phoenix), izay mifamahofaho ny fifanoherana ary mitazona ny sabatra. Tianao ve ny hahafantatra bebe kokoa ny momba ny rà mandriaka sy ny fomba hilazako hoe izy ireo no avatars lazarezy ao anatin'ity zava-misy ity, iza no manana andraikitra amin'ny fitantanana ny script? Vakio avy eo ilay lahatsoratra eo ambanin'ny rohy farany. Mazava ho azy fa azonao atao ihany koa ny miala sasatra ary mankafy ny "mofo sy ny lalao" hafa an'ny governemanta.
Lisitry ny rohy loharano: wikipedia.org, nowtheendbegins.com
Tags: 33, ab, Albert, Chao, choas, Featured, Logo, orde, ordo, Pike, fitsipika, uit, freemasonry freemasons
31 Martsa 2019 ao amin'ny 15: 04
Marina tokoa fa misy ireo "mpanjaka mpanjaka" efa niaina nandritra ny taonjato maro sy taonjato maro tany Babylona (Ejipta fahiny) na Ejipta.
Izy io dia mahakasika ny olona izay tamin'izany fotoana izany dia efa nanjaka toy ny mpifindra monina amin'ny olon-tsotra. Mbola mitranga ankehitriny izany, ireo mpifindra monina koa dia mpifindra monina, fa manafina an'ity lavadrano ity avy amin'ny vahoaka. Tsy maninona ny andevo satria ny fahitana ny andevo no zava-misy.
Mahaliana fa miantso ny Mason'ny Mason'ny Maitso izy. Izany no olona nanorina ny mafia. Ny Mafia dia midika hoe Mazzinii autorizza fuochi e attentati. Mazzini vetivety monja dia mamela ny brabstichtibg sy ny fanafihana hatao. Hitanao ny fifandraisana misy eo amin'ny Italiana sy ny mafia, izay tsy tena fifandraisana fitiavan-tanindrazana, fa ny fahalalahan'ny heloka bevava. Ao Sicily ianao dia manana 'Italiana maro' izay manana lamin'asa mason'i Masonic!
Izany koa dia manazava ny antony mahatonga ny mafia hiheverana fa i Italia sy i Eoropa dia manatsara ny mpifindra monina. Tahaka ny firenena maro, tahaka an'i Holandy ihany, i Italia dia tsy firenena tsy misy firenena.
Ny olona malaza dia antsoina hoe ombidia milomano izay ampiasaina amin'ny endriny.
31 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 36
Mazava ho azy fa tsy maintsy mijanona ho an'ny Hollywood mpilalao Machiavillian ao amin'ny Kikkerlandje kely kely misy antsika, demagoga ampy ho an'ny rehetra.
31 Martsa 2019 ao amin'ny 16: 40
31 Martsa 2019 ao amin'ny 19: 53
Ry Zalm tsara fanahy / mrs. Zalm misaotra betsaka anao amin'ny adihevitra momba ny adihevitra momba ny fampielezan-kevitry ny governemanta ao amin'ny Fanjakan'i Machiavlli.
Angamba tsy misy dokam-barotra azo atao eto amin'ny vokatra, fa ity vokatra etsy ambany ity dia tena nilaina tokoa, satria nanapa-kevitra ny adihevitra manontolo aho .................. ..
31 Martsa 2019 ao amin'ny 22: 07
@Camera, mahafinaritra fa afaka nahita ny lalao manontolo aho .. Miaiky aho fa nahita azy io taorian'ny 2 minitra .. ny mozika sekoly ambaratonga fototra dia manana tombam-pahaizana ambony kokoa noho io biby io, dia maneho fotsiny ny fomba nahazoan'izy ireo ny ny salan'isa mipetraka Madurodam
Miezaha haingana sy hery! 😀
7 Aprily 2019 ao amin'ny 20: 27
😀 hahaha, mahatsiaro ny fanerena hanomezana ranonorana asidra Madurodam amin'ny fanesoana ireo trano madinika rehetra ireo ... 😛
Eny, ny Huis ten Bosch sy ny tokotany dia afaka manisa amin'ny fitsidihana iray.
1 Aprily 2019 ao amin'ny 10: 05
Manaja ireo izay manaraka ny tsiambaratelon'ny haino aman-jery tsy tapaka aho mba hitatitra momba ny fampielezan-kevitra sy ny fialantsasatra, ary ny tanjona dia ny mandefa ireo mbola matory ao amin'ny tanjona tiany. Tsy afaka heveriko intsony ireo mpandainga tsy misy ilana azy ireo.
31 Martsa 2019 ao amin'ny 17: 55
Misaotra, lahatsoratra tsara, fitaovana ho an'ny World Order Total
Ity koa dia nanazava tsara tao amin'ity rohy ity.
Ny ady kâlda farany izay nahary dia namorona ny votoaty ampiasain'ny toby miaramila-indostrialy hanangana tafika mitam-piadiana (UN?)
31 Martsa 2019 ao amin'ny 20: 34
Ny fotopampianarana momba ny Pike araka ny voarakitra ao amin'ny Morals and Dogma dia mahita ny niandohany tao Kaballah, ny fizarazarana sy ny fitsipika ny synagogan'i satan (Saturn) dia hita fa tena mahomby ny daty.
31 Martsa 2019 ao amin'ny 20: 38
14 Aprily 2019 ao amin'ny 20: 28
33 mpivady, zanakalahy sy zanakavavy 90. Ny tebitebin'ny mpikatroka moskea ChCh ho an'ireo izay tavela any aoriana. Fifandrifian-javatra fa ny isa 33 indray miseho indray.
« Brexit sy ny korontana nokarohina ho an'i Eoropa
Hanatratra fe-potoam-piasana ve i Donald Trump? »
Total visits: 27.358
ZalmInBlik op Netflix 'Pandihan-tena: ahoana ny hisorohana ny fampielezana doka amin'ny valan'aretina momba ny vaksiny maneran-tany SuperHuman-2.0?